Nhau - Kurovedzwa paKubasa kwehunyanzvi uye Kufanirwa Chitupa cheWelders neMahara Vanoshanda
Maitiro ekusimbisa anoda vashandi kuti vabatanidze zvikamu zvesimbi nekunyungudutsa zvidimbu zvesimbi uye nekuzvibatanidza pamwechete. Sekureva kwe Bureau yeVashandi manhamba, ma welders ane mikana yakanaka yekushanda, kunyangwe hapanzove nekukurumidza kukura mukati meiyi ndima. Iwe unofanirwa kupihwa kudzidziswa usati washandira sewelder. Kudzidziswa kunowanikwa kumunharaunda makoreji, zvikoro zvehunyanzvi uye muzvikoro zvepamusoro. Kugadzirira kushanda sewelder kunotora mashoma sevhiki nhanhatu.
Kuverenga Blueprint inzira-pane kosi iyo inobvumidza vadzidzi kuti vadzidze uye vadudzire iwo masimbi emoto uye mifananidzo yemisangano inosanganisirwa mune mazhinji mapurani anoshandiswa munzvimbo dzemabhizimusi. Nekudzidza kuverenga mapurani, ma welders anokwanisa kuona hupamhi, kureba uye zviyero zvehuremu, kududzira kuwisira uye zvimwe zviratidzo uye zvinhu zvekudhirowa zvinonyatsoratidza ruzivo.
Welders inofanirwa kuve yakasununguka nejometri uye zvikamu. Ivo vanofanirwawo kuziva maitiro ekuverenga mafomula akapusa uye kutora zviyero chaizvo. Aya hunyanzvi hwakakosha nekuti ma welders anofanirwa kuve akajeka kuitira kudzivirira zvikanganiso zvinodhura. Welders anowanzo shandisa iwo mamwe masvomhu mafomula, izvo zvinoita kuti zvive nyore kune maowelders matsva kubata nekukurumidza.
Chemistry uye Fizikisi
Welding hunyanzvi hunoshandiswa nemisimboti yeinjiniya, saka unofanirwa kuziva mabhesiki emakemikari uye fizikisi. Chemistry uye fizikiki sainzi inodzidza simba uye nyaya uye mhedzisiro yazvo ichitaurirana. Welding ndiko kubatanidzwa kwesimbi mbiri pamwechete nekuidziisa, saka pane chimiro chemakemikari uye chemuviri chinoitika. Nekudzidza zvakakosha kemisitiri uye fizikisi, iwe unowana nzwisiso yakafara yezviri kuitika kana simbi ichipisa nekusunga pamwechete.
Welding inosanganisira kugadzirira simbi, kuitarisa kuti ngura, kushandisa yakakodzera giya rekuchengetedza uye nekunyungudutsa zvidimbu zvesimbi pamwechete. Welders vanofanirwa kuziva musiyano uripo pakati pesimbi yakanaka neyakaipa. Ivo vanofanirwa kuziva nzira yekuteerera kune simbi padhuze panguva yekumonera nekuti iyi ndiyo nzira yavanozoziva kana simbi yacho ichipisa zvakanaka. Welders inofanirwa zvakare kuziva maitiro ekuteerera zvakaringana kumidziyo yavo yekutungidza. Iyi ndiyo imwe nzira yekuyera maitiro ekushambadza ari kuenda.